ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Agathe Auproux s
Dhowr bilood ka dib markii uu ku dhacay cudurka kansarka, Agathe Auproux ayaa la sheekeysatay Instagram oo ku saabsan Instagram oo ku saabsan dagaalka ay la leedahay cudurka.
"Hagaag, waa inaan kuu sheegaa wax. Waxaan qabaa kansar. Lymphoma dhab ah. Waxaan ku jiray daweynta kiimikada tan iyo bartamihii December iyo saddexdii bilood ee kale ". 11 Bishii Maarso, Agathe Auproux waxa uu ku soo booday cabsida qoto dheer ee taageerayaashiisa isagoo ku dhawaaqaya jirradiisa iyada oo xisaabteeda Instagram, iyada oo cinwaan looga dhigay sawir iyada oo ku jirta caleenta buluuga ah. Tan iyo markaas, qoraaga Isu dheellitir boostada! ayaa si isdabajoog ah wuxuu ku bixiyay dagaalka, isagoo isku dayaya in uu u xaqiijiyo taageerayaasha uu aaminsan yahay. Dibadbaxii axadda April 14 halkaasoo gabadha yar ay uga jawaabtay sheekada sheekada sheekada Instagram oo waydiiyay iyada haddii ay dadku si kala duwan uula dhaqmeen tan iyo markii ay ogaadeen xanuunkeeda.
"Maya", jawaab Agathe Auproux taas oo sharraxaysa in aanay nafteeda u dhaqmin ayna ku noolaanin si ka duwan. "Kansarka iima qeexayo", ayaa sheegay in qoruhu uu sheegayo in cudurku u ogolaaday dadka qaarkood hareeraheeda "In la iftiimiyo taageeradooda, saxsanaanta, joogitaanka iyo tayadooda". "Waxay kaa caawineysaa inaad aragto cidda dhabta ah ee aad jeceshahay, waxaan rumaysanahay"sii socota Agathe Auproux "Yaa sheegay inuu yahay mid xoogan oo taabanaya si uu u ogaado in". Gabadha yaryari waxay ku kalsoon tahay dadka kale "Waxa kale oo muuqday habka kale, ee ma ahan mid si aad ah loola hadlo". "Laakiin waa wanaagsan tahay"Waxay ku soo gabagabowday dagaal la yaab leh.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/agathe-auproux-s-exprime-sur-sa-maladie-le-cancer-ne-me-definit-pas-956964
Cancer Pride: maalin si loo wacyigeliyo wacyiga ku saabsan la dagaallanka cudurka
Kansarka sanbabada, wax yar oo qalad ah